डेड पोएट्स सोसाइटी : नेपाली अभिभावकसँग मिल्दो अमेरिकीहरुको कथा फिल्म ‘डेड पोएट्स सोसाइटी’ कविता पढ्ने र कविताप्रति चाह राख्नेले हेर्न आवश्यक छ। अभिभावक, विद्यालयका शिक्षक र उच्च शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीले हेर्न आवश्यक छ। हामीले पछ्याइरहेको बाटोमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले इट्टाको काम गरिरहेको छ कि हाम्रा पैताला घोच्ने काँडो बनिरहेको छ भन्ने विषय फिल्ममा कलात्मक रुपमा देखाइएको छ। शनिबार, कात्तिक ६, २०७८
प्रदीप नेपालको बकपत्र : शत्रुता, धोका र स्वार्थको अर्को नाम राजनीति हो, म साहित्यकार हुँ ‘मन्त्रीमा के छ? म पनि भएँ, गाडी गुडेन भनेर लात्तीले गाडीलाई हान्ने करिमा बेगम पनि भइन्। तर, म साहित्यकार भए जसरी करिमा बेगम साहित्य... शनिबार, कात्तिक ६, २०७८
आमालाई बुहारी चाहियो, तर म ‘छोरो’ थिइनँ दिदीको विवाह भइसकेको थियो। दाजुको कुनै भर थिएन। ममीको उमेर पनि ढल्कँदै थियो। म पहिचान र अधिकारको सङ्घर्षमा होमिएकी मान्छे, कहिले कहा... शनिबार, असोज ३०, २०७८
न्याय खोज्ने नयाँ शैली दुई दशकअघि अमेरिकी फिल्म निर्देशक मार्टिक म्याकडोनागले अमेरिकाको कुनै दुर्गम ठाउँको राजमार्गमा तीन वटा खाली ‘बिलबोर्ड’ देखेका थिए। त... शनिबार, असोज ३०, २०७८
राजवका तीन लघुकथा राजवका तीन लघुकथा : खुसी, कठपुतली कक्ष र सम्पन्न कानहरू शनिबार, असोज ३०, २०७८
ऐरावतीपारिका गाउँ चिना बजार छिचोली रामपुर नाघेर हामी ऐरावती पुग्यौँ। विशाल ऐरावती हेर्नेबित्तिकै मेरो मनमा श्रद्धाका लहर, मायाका तरङ्ग र आदरका शब्दहरू... शनिबार, असोज ३०, २०७८
विद्यालय एक प्रेम शिविर म कविता र गीत लेखिटोपल्दै आएको मान्छे। आक्कलझुक्कल आकस्मिक आलेख लेख्ने आदत पनि बस्यो। तर, उपन्यासको लामो लेखन–यात्रामा पसेको थिइनँ।... शनिबार, असोज २३, २०७८
डाक्टरको कलायात्रा : बंगलादेश पढ्न जाँदा पनि चित्र बनाउनमै मस्त डा. सविना श्रेष्ठ वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ हुन्। तर, उनको परिचय यतिले मात्र पूरा हुँदैन। उनी पेसाले डाक्टर र रुचिले चित्रकार हुन्। कवित... शनिबार, असोज १६, २०७८
पैतालामा हिउँ, आँखामा हिमालय बेलैमा पुग्नु थियो, निम्तो मान्न। मनभरि थियो खुसी र कुतूहल। सरासर काङ लाको आँगन पुगेर अन्तिम पटक हेर्नु थियो, धीत मर्ने गरी नार–फुको... शनिबार, असोज १६, २०७८
सुराकी ऋद्धिकान्त आफ्ना बाउ धर्मानन्दसँगै वल्लो किराँतबाट बसाइँ सरेर माझ किराँत पुगेका थिए। वल्लो किराँतको चिसापानी गाउँमा बिहानबेलुका हातम... शनिबार, असोज १६, २०७८
सिउँडी के मैले गुलाब, मखमली वा गुराँस जस्तै फुल्नु पर्ने हो? म हुनलाई घोटिनु पर्ने हो तिम्रो सनातन सौन्दर्यशास्त्रको कसीमा? के... शनिबार, असोज १६, २०७८
पलाँसको बास्नामा अल्झिएको समय पलाँस कुन महिनामा फुल्छ, त्यो चाहिँ मैले बिर्सिएँ। घरअगाडिको पलाँसको रुख ढलेको पचास वर्ष नाघिसक्यो। त्यस पलाँसको रुखको छायामुनिको मे... शनिबार, असोज १६, २०७८
चित्रकार कृष्ण मानन्धरलाई साथीले भनेका थिए- धत्! ‘पुँ’ले गर्ने काम पनि पढ्ने? ‘स्किब समूह’बाट शशी, कृष्ण, इन्द्र र वत्सले चित्रकलामा छुट्टाछुट्टै शैली बनाए। उनीहरुले आफ्नो समयलाई चित्रकलामा पृथक कालखण्ड बनाए। न... शनिबार, असोज ९, २०७८
बैँसले मदमत्त लोमन्थाङ चमक छ, सबैको अनुहारमा। मलिलो पाटामा हलक्क हल्केको बिरुवा जस्तो सब्लाएको छ, सबैको शरीर। गफिँदै, मुस्काउँदै, हात हातमा मन्त्रमाला गन्द... शनिबार, असोज ९, २०७८